गृहपृष्ठ अटो फोर्ड इकोस्पोर्ट २०२१ संस्करण २०२० को मूल्यमा वुकिङ्ग खुल्ला
जी.ओ. अटोमोबाईल्स प्रा.लि. (जी.ओ फोर्ड) फोर्ड गाडीको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेताले नयाँ फोर्ड इकोस्पोर्ट २०२१ संस्करण वुकिङ्ग खुल्ला गरेको छ ।
सन् २०१३ मा विक्री शुरुवात भएको र सन् २०१७ मा प्रमुख अद्यावधिक (ड्रयागन सीरीज इन्जिन जडित) फोर्ड इकोस्पोर्ट कम्प्याक्ट एसयूभी सेगमेन्ट/श्रेणी मा नै खेल परिवर्तकको रुपमा आएको कम्पनस्ले जनाएको छ ।
यसले लगातार नयाँ सुविधाहरु र प्रविधिहरुको साथ आफ्नो श्रेणी/सेगमेन्ट नै पुन : परिभाषित गर्दै आएको छ । फोर्ड इकोस्पोर्टमा ग्राहकको विश्वासको कारण मोडल २०२० सम्पूर्ण रुपमा विक्री भइसकेको छ तथा नयाँ मोडल २०२१ को लागि २०२० को मूल्यमा नै बुकिङ्ग खुल्ला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सन् २०२१ संस्करण ईकोस्पोर्ट Bharat stage VI (BS-VI)मा आधारित पेट्रोल र डिजेल इन्जिनका साथ २०२० संस्करण मूल्यमा वुकिङ्ग खुल्ला गरिएको छ । यो गाडी ड्राइभिङ्गको लागि रमाइलो, शक्तिशाली र पेट्रोल/डिजेल इन्जिनको लागि विशिष्ट रोजाइ रहेको छ । लाइन–अपमा फोर्डको नयाँ ३ सिलिन्डरयुक्त १.५ लि. Ti-Vct पेट्रोल ईन्जिन समावेश छ । जसले 122 PS power र 149 NM Torque प्रदान गर्दछ । पेट्रोल ईन्जिन पाँच स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिशन र ६ स्पीड Automatic Transmission मा उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले ईकोस्पोर्ट डिजेलमा फोर्डको विश्वस्त र भरपर्दो BSVI मा आधारित 1.5 लि. TDCI डिजल ईन्जिन रहेको छ जसले100 PS power र 215 NM Torque kप्रदान गर्दछ र यो म्यानुअल ट्रान्समिशनमा उपलब्ध भएको जनाएको छ । यस ईकोस्पोर्टले आकर्षक वाहिरी बनावट, आरामदायी भित्री बनावट तथा स्टाइल लाई कायम राखेको छ ।